NANG KYAR OO (နန်းကြာဦး): November 2014
NANG KYAR OO (နန်းကြာဦး)
ဆရာဦးစောထူးထူး ထံမှရရှိထားသော တပည့်တော်စစ်မွေးထုတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်သုံးအုပ် လက်ခံရရှိ
ခဲ့ပါသည်။ ထိုတပည့်တော်စစ်မွေးထုတ်ခြင်း စာအုပ်သည် ယုံကြည်သူများအနေဖြင့် ဖတ်ရန် သင့်တော်
သော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များအနေနဲ့တပည့်တော်အမှန်ဖြစ်ရေးအတွက် ဘယ်
လိုလိုက်နာကျင်းသုံးရမည်ဆိုတာကို ရေးသားထားပါသည်။ ဤစာအုပ်အား ပြုစုသူမှာ ဆရာဦးဒီအောင်ရီ
ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်များထဲမှ အတွဲ(၁)တွင်ပါဝင်သော ဘုရားသခင်၏ အမည်နာမများကို ယုံကြည်သူ
အယောက်စီတိုင်း သိရှိရန် အလို့ ဌါ ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ကို ( Elohim )ဟု ကျမ်းစာတွင် ၂၅၇၀ ကြိမ်ပါရှိသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင် အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Elyon တန်ခိုးကြီးမားသော ဘုရား
Shaddai အစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘုရား
Olam ထာဝရကာလ၏ အစဉ်တည်မြဲသော ဘုရား
Adonai သခင်၊ ဘုရား
Jehovah အကြိမ် ၆၈၂၃ ကြိမ်ပါရှိသည်။ ပဋိညာဉ်ပြုသော ဘုရား။ အမည်ကွဲ(၉)မျိုးရှိသည်။
Jireh ကူညီမစပံပိုးသော ဘုရား
Nissi ကျွန်ုပ်ကို ကာကွယ်သော ဘုရား
Shalom ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသော ဘုရား
Sabaoth ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ ဘုရား
Maccaddeschcem သန့် ရှင်းစင်ကြယ်စေသော ဘုရား
Rohi သိုးထိန်းကြီးနှင့်တူသော ဘုရား
Tsidkenu ဖြောင့်မတ်သော ဘုရား
Shammah သင်နှင့်အစဉ်အမြဲရှိနေသော ဘုရား
Raph အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေသော ဘုရား
Posted by Kosai Wanna at 17:01 No comments:
Labels: ၀ိညာဉ်ရေးရာ ဆောင်းပါး
ခရစ်ယာန်အသက်တာ အသက်ရှင်ခြင်း သင်ခန်းစာများ
Ch livinglessons.2014 from Murann Ezine
Posted by Kosai Wanna at 22:07 No comments:
Labels: ၀ိညာဉ်ရေးရာ စာအုပ်
Posted by Kosai Wanna at 21:52 No comments:
ယုံကြည်သူ နှင့် တော်..တီ တီ.. တော်
ကိုဘဦး တို့ ရွာသည် မြန်မာပြည်အတွင်း၌ရှိသော အလွန်ခေါင်သောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ထိုရွာတွင်နေထိုင်သူများသည် အလွန်ရိုးသားပြီး အပြင်ပန်းဗဟုသုတမရှိကြပါ။ ထိုရွာရှိရွာသူရွာသားများသည် လယ်ယာ
လုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် မွေးမြူးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ မြို့ ပေါ်သို့သွားခြင်းမှာ အလွန်ရှားပါး၏။ထို့ 
ကြောင့် မြို့ ပေါ်သို့ သွားရောက်ခြင်းမှာ သူ့ တို့ အတွက်အလုပ်ပို တခုဟုသတ်မှတ်ပြီး၊ ရွာထဲတွင် မြို့ ပေါ်
သို့မရောက်ဘူးသူပင်ရှိလေ၏။
တနေ့ တွင် ကိုဘဦးတို့ ရွာမှ ရွာသားတစ်ယောက်မြို့ တက်ပြီး၊ အပြန်တွင် မြန်မာ့တူရိယာ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်
သော နှဲ တစ်ခုဝယ်လာပါသည်။ နှဲကို ၀ယ်လာသောလည်း နှဲကိုမည်သို့ မှုတ်ရမည်ကို လုံးဝမသိပါ။ ရွာတွင် နှဲ ရောက်နေကြောင်း သတင်းရသည်နှင့် ကိုဘဦးတစ်ယောက် နှဲမှုတ်ရန်ထွက်သွားတော့သည်။ သို့ သော်
ကိုဘဦး သည်လည်း နှဲမှုတ်တတ်သည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ နောက် ကိုဘဦး နှဲကိုယူပြီး မှုတ်သောအခါ.......
တော်..တီ တီ.. တော် ကလွဲပြီး ဘာသံမှမထွက်လာ။ ဆက်တိုက်မှုတ်နေသော်လည်း တော်..တီ တီ..တော်
ကလွဲပြီး ဘာတစ်ခုမှထပ်မထွက်လာတော့ပါ။ သို့ သော် ကိုဘဦးတို့ ကတော့လုံးဝမလျှော့ပါ။ အားရအောင်
တော်..တီ တီ..တော် လုပ်ပြီးသောအခါ၊ နှဲအကြောင်းတတ်သိယောင်ဖြင့် အာဝဇွန်းရွန်အောင်ပြောဆိုတော့
ပါသည်။ ကိုဘဦး ပြောပြီးသိပ်မကြာ ရွာသားတစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာခါ ကိုဘဦးကဲ့သို့တော် တီတီ
တော်.. လုပ်ပြီးသူလည်းကြွားလုံးထုတ်ပါတော့သည်။ ထို့ နောက် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရောက်လာ
ခါ တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးရအောင်ကြွားလုံးထုတ်ကြတော့ပါသည်။ သို့ သော် ယနေ့ တိုင်အောင် နှဲ မှုတ်
တတ်သူတစ်ယောက်မှ ရွာထဲမှမရှိသေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမှန်တကယ်တတ်သူမရှိဘဲ တတ်ယောင်ကား လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပင် ယနေ့သမ္မာကျမ်းစာတွင်လည်း...တော်..တီ တီ..တော် လုပ်နေသော ယုံကြည်
သူများရှိစွာရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို အမှန်တကယ်နားလည်ပြီး သမ္မာတရားအမှန်ပြောသောသူများသည်၊ နည်းလာကြသည်။ တတ်ယောင်ကား လုပ်နေသော ခရစ်ယာန်များစွာပေါ်လာပြီး မှားယွင်းသော အယူ
"အတွင်း၌ကြမ်းတမ်းသောတောခွေးဖြစ်လျက်၊ သိုးရေကိုခြုံ၍ သင်တို့ရှိရာသို့လာသော မိစ္ဆာပရောဖက်တို့ကို သတိနှင့်ရှောင်ကြလော့။" ( ရှင်မဿဲ ၇း၁၅ )
Posted by Kosai Wanna at 08:39 No comments:
တစ်ပါတည်း ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံသော ရှင်ဘုရင် ( ၃ )
ယုဒလူတို့ သည် သခင်ယေရှုကို သူတို့ မျှော်လင့်ထားသော ရှင်ဘုရင်အဖြစ်၊ ဖြစ်မလာသောအခါ ဘုရားသ
ခင်ကိုလွန်ကြူးပြောဆိုသူအဖြစ် စွပ်စွဲသတ်မှတ်ပြီး၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်ရိုက်ထားပါဟု ပိလတ်မင်းအားတော
င်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျူးလူမျိူးတို့ သည် ထိုခေတ်ကကာလက အလွန်ဆင်းရဲကျပ်တည်းပြီး၊ ရောမတို့ ၏
လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို မျှော်လင့်နေချိန်လည်းဖြစ်၏။
ထိုအချိန်အခါတွင် သခင်ယေရှုသည် နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြောပြီး၊ နိမိတ်လက္ခဏာများ
ပြသသောအခါ၊ ယုဒလူတို့ သည် သူတို့ ၏ခက်ခဲကျပ်တည်းနေသောဘ၀မှ ကယ်တင်ပေးမည့် ရှင်ဘုရင်အ
ဖြစ် အမှတ်မှားခဲ့ကြပါသည်။ ယုဒလူမျိုးတို့ လိုချင်သော ရှင်ဘုရင်သည်၊ မြေကြီးပေါ်ကိုအုပ်ချုပ်သော ရှင်ဘု
ရင်ဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာခြင်းသည်၊ ဤမြေကြီးပေါ်တွင် သူနိုင်ငံတည်
ထောင်ရန်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အသက်တာများတွင်လည်း၊ သခင်ခရစ်တော်ကို မိမိတို့ ၏ ဤလောက
တွင် လိုအပ်နေသောအရာများကို ဖြည့်ဆည်းမည့်သူအဖြစ် အမှတ်မှားနေကြပါသည်။ ခရစ်တော်လာရခြင်း
မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်အတွက်ဖြစ်သည်ကို အမှောင်စိတ်က ဖုံးလွမ်းထားသောကြောင့် မေ့နေကြပါသည်။
ကားတိုင်ပေါ်မှာ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် အသေခံခြင်းက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုတာ ယုဒလူမျုိုးတွေ
နားမလည်ခဲ့ပါ။ ထို့ အတူ ယနေ့ ခရစ်ယာန်များ၊ ခရစ်တော်ဘုရားကို လိုတရဘုရားကဲ့သို့သတ်မှတ်ပြီး
လောကီအရာများကို တောင်းခံနေကြပါသည်။ " နိုင်ငံတော် နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ရှေးဦးစွာ
ရှာကြလော့။" ( ရှင်မဿဲ၆း၃၃ ) ဆိုသည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို ယနေ့ ခရစ်ယာန်များ ကောင်းစွာ နားလည်ပုံမပေါ်
ရှေးက ယုဒလူမျိုးများကဲ့သို့ ပင် ယနေ့ ခရစ်ယာန်များ အသက်ရှင်လျှက်ရှိပါသည်။ သခင်ခရစ်တော်နှင့်
ယုဒလူတို့ အကြောင်း ပြန်ဆက်ရလျှင်၊ ပိလတ်မင်းသည် သခင်ယေရှုတွင် အပြစ်မရှိကြောင်းကို သိသည်။
ထို့ ကြောင့် လွတ်ချင်ပါသော်လည်း ယုဒလူတို့ ကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြောင်းကို ရှင်ယောဟန် ၁၉း၈ တွင်တွေ့ 
ရပါသည်။ ဤနေရာတွင် "ပိလတ်မင်းသည် သာ၍ကြောက်သဖြင့် " ဟုရေးသားထားသည်ကို တွေ့ ရပါသ
ည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိလတ်မင်း၏ ဇနီးထံမှ သခင်ယေရှုနှင့် ပက်သက်ပြီး သိရသော အိမ်မက်
( ရှင်မဿဲ၂၇း၁၉ )အရလည်းကောင်း၊ ယုဒလူတို့ ၏ ခေါင်းဆောင်တို့ မှ ဤသူသည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရား
သခင်၏ သားတော်ဟု ပြောပါသည်ဟု ကြားရသောအခါ၌လည်းကောင်း၊ ထိုခေတ်က ဂရိနတ်ဘုရားများ
နှင့် ရောမနတ်ဘုရားများသည် လူသားများတို့ ထံသို့ ၊ လူ့ အသွင်ဆောင်ကာ လာတတ်ကြသ်ာကို ယုံကြည်
ကြသောလည်းကောင်း၊ ပိလတ်မင်းကြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပိလတ်မင်းသည် ကြောက်ခြင်းမှာ သခင်ယေ
ရှုသည် နတ်ဘုရားတစ်ပါးပါး ဖြစ်ခဲ့သော်ဆိုသည့်အနေဖြင့် ကြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
( ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ )
Posted by Kosai Wanna at 20:04 No comments:
Love Is Supereme
Posted by Kosai Wanna at 23:20 No comments:
Posted by Kosai Wanna at 23:01 No comments:
သခင်ယေရှု၏ ဒဏ္ဍရီနှင့် သမိုင်း
Posted by Kosai Wanna at 22:04 No comments:
သတင်းစကား ( ယေရှုခရစ်၏ ဧ၀ံဂေလိ သတင်းကောင်း )
Posted by Kosai Wanna at 16:17 No comments:
နေနီ ၏ ခရစ်ယာန်နှင့်လိင် လွတ်လပ်ခွင့်
Posted by Kosai Wanna at 16:01 No comments:
Posted by Kosai Wanna at 12:32 No comments:
Labels: ၀ိညာဉ်ရေးရာ စကားစု
တစ်ပါးတည်းသော ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံသောရှင်ဘုရင် ( ၂ )
ပိလတ်မင်းသည် ယုဒလူတို့ စိတ်ကျေနပ်စေရန် ယေရှုကိုရိုက်ပြီး လွတ်မည်ဟု ရှင်လုကာ ၂၃း၁၆ အရသိရှိရပါတယ်။ ထို့ သို့ လွတ်ခဲ့သည်ရှိသော် သမ္မာကျမ်းစာသည် မှန်ကန်မှုမရှိ၊ ကျမ်းချက်မပြည့်စုံတော့ပဲ၊ ပရောဖက်ပြုချက်များ သည်လည်းလွဲမှားသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သခင်ယေရှု လွတ်မြောက်ခဲ့ရှိသော်၊ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတရပ်လုံး အပြစ်နွံထဲမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တော့ပါ။ သခင်ယေရှု လူသားတွေအတွက် အသေခံမည်ဆိုခြင်းကို၊ နှစ်ခြင်းဆရာ ရှင်ယောဟန်က ရှင်ယောဟန် ၁း၂၉ တွင် ဤလောက၏ အပြစ်ကိုဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်အဖြစ် ခိုင်းနှိုင်း၍၊ ပရောဖက်ပြုထားဖြင့်လည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ထို့ ကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ပိလတ်မင်းထံသို့ ရောက်၍၊ ရိုက်နှက်ပြီး စစ်သားတွေသည်၊ ဆူးပင်နှင့်ရစ်ဦးရစ်(သရဖူ)ကို ခေါင်းပေါ်တင်ခံရ၍ ခရမ်းရောင်ဝတ်လုံကိုခြုံစေခဲ့ကြ၏။ ဤအမှုအရာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
ကမ္ဘာဦးတွင် လူသား အာဒံ အပြစ်လုပ်ဆာင်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်၊ မြေပေါ်မှာ ပေါက်ခဲ့သောဆူးပင်များသည်
(ကမ္ဘာ ၃း၁၈)သခင်ခရစ်တော်၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဆူးရစ်သရဖူ တင်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်သက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ အပြင်စစ်သားတွေသည် ရှင်ဘုရင်တွေဝတ်သော ခရမ်းရောင်ဝတ်လုံကို၊ သခင်ယေရှုကိုဝတ်စေပြီး၊ ယုဒလူတို့ ၏ ဘုရင်မင်းကြီး အဖြစ်လှောင်ပြေင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့လှောင်ပြောင်ခံရုံသာမက၊ ရိုက်ပုတ်ကြပါသေးသည်။ထိုသို့သခင်ယေရှု ခံခဲ့ရသော ရိုက်နှက်ချက်များသည် ကျွန်တော်တို့ အတွက်ဖြစ်သည်ကို သိနားလည်သင့်၏။ ထို့ နောက် ဆူးရစ်သရဖူဆောင်းပြီး၊ ခရမ်းရောင်ဝတ်လုံကိုခြုံထားကာ သခင်ယေရှုကို ယုဒလူမျိုးတို့ ၏ ရှေ့ သို့ ထုတ်ပြပြီး၊ ဤသူ၌ ဘယ်အပြစ်မှ မတွေ့ ကြောင်း ကြေငြာခဲ့၏။
ထိုသို့သခင်ယေရှုကို ယုဒလူတို့ ရှေ့ တွင်ထုတ်ပြခဲ့သော်လည်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီးတို့ သည် လည်းကောင်း၊ လုလင်တို့ သည်လည်းကောင်း ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါဟု၊ ကြွေးကြော်ကြောင်း
တွေ့ ရပါသည်။ ထိုယုဒလူတို့ သည် သခင်ယေရှု၏ ပြသသောနိမိတ်လက္ခဏာများကို တွေ့ မြင်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ ထိုသူတို့ ၏ စိတ်ထဲတွင် အလွန်မိုက်မဲသောကြောင့် အမှန်မမြင်ခြင်းသာဖြစ်၏။ တခါတရံတွင် ကျွန်တော်၏ အသက်တာ၌ သခင်ဘုရား၏ နိမိတ်္လက္ခဏာများကို တွေ့ မြင်ရတတ်သည်။ သို့ သော် ကျွန်တော်တို့ သည်၊ အလွန်မိုက်မဲသော အတွေးအခေါ်ဖြင့် မိမိကြိုးစားမှုကြောင့်ဟု ထင်မှတ်တတ်ကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် အလုံးစုံကို ပိုင်သအုပ်စိုးတော်မူသော အရှင်သခင်ဖြစတော်မူကြောင်းကို ငါဟူသော အတ္တစိတ်
ကဖုံးကွယ်ထား၏။ ထိုအရာက ယုဒလူမျိုးတွေကဲ့သို့ ပင် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အသက်တာ၌ အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ခြင်း
ဖြစ်ပ်သည်။ ယုဒလူတို့ သည် သခင်ယေရှုကို သူတို့ လိုချင်သော လောကီရှင်ဘုရင်အဖြစ်မှန်းထားခဲ့ရာမှ ၊
ထင်သလို မဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ဘုရားသခင်ကိုလွန်ကြူး ပြောဆိုသူအဖြစ် စွပ်စွဲသတ်မှတ်ပြီး၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ရိုက်ထားပါဟု ပိလတ်မင်းအား တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်သည် ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များ
အတွက် အဓိက သတိထားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ သည်၊ အရာရာတိုင်းကို မိမိလိုချင့်သည့်
ပုံစံဖြစ်အောင် ဆွဲသွင်းတတ်ကြသည်။ ကိုယ်လိုချင်သည့် ပုံစံမရသောအခါ မကောင်းဘူးဖြစ်သွားတတ်သည်။ ယနေ့ တွင်လည်း၊ တရားဟောဆရာ၊ ဓမ္မဆရာများကို မိမိတို့ လိုချင်သည့် တရားမျိုးကိုဟောပြောစေ
ချင်ကြသည်။ အပြစ်ဖော်ပြသော တရားဟောခြင်းမျိုးကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြပါ။
ဓမ္မဆရာများသည်လည်း သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်၂တိ ၃း၁၇ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မပောာပြောရဲကြတော့ပါ။ သခင်ယေရှု သက်တော်စဉ်ကာလတွင် ဖာရိရှဲများနှင့် ယုဒလူမျိုးတို့ ကို အပြစ်ဖော်ပြ၍ ဆုံးမခဲ့သည်
( ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ )..
Posted by Kosai Wanna at 21:03 No comments:
စာတိုက်ပုံးထဲကို အရောက်ပို့ ပေးမယ်
SG17: Myanmar Gospel Song Lyrics
Rev. U Min Lwin
THANG NO: Myanmar Christian Ebook
MGS Internet Radio Day 01
Pa. Hau Len Thang
"We Say Thank You" San Francisco Burmese Church Choir
Myanmar Grace Ministries (MGM)
MGM Discipleship Training - 2012
ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံတစ်လုံးတ၀တည်းဖြစ်ရေးနှင့် ဘာသာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းကော်မရှင်၏ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ | Gloria News
Welcome to Bangkok Christ Church Home Page
Myanmar Christian Blog Collection
ebooks - Mandalay Catholic Archdiocese
Burmese Our Daily Bread
The Hope (မျှော်လင့်ခြင်း)
တစ်ပါးတည်းသော ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံသောရှင်ဘုရင် ( ၂ )...
ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.